China obere njupụta Cleaner maka akwụkwọ pulping akụrụngwa factory na suppliers | YUNFENG
onye na-ehicha ihe dị ala maka akwụkwọ akụrụngwa
Nkọwapụta Ngwaahịa Onye na-ehicha ihe dị ala kwesịrị ekwesị maka nhichapụ eriri eriri na 0.4-1.2%. 606 ukwuu oru oma arọ Cleaner wepụ slurry ájá, iron filings, ájá na ibu ink ahụ na ndị ọzọ na-adịghị ọcha na a dịgasị iche iche nke pulp ọcha usoro. 400 arọ Cleaner nwere ike ikpokọta dị ka slurry dị iche iche ìhè Cleaner, iji nweta chọrọ ihicha mmetụta. Isi teknụzụ teknụzụ Otu ntinye: 580-600L / min N'ime plasma pre ...
Low anọgidesi Cleaner adabara nhicha eriri nkwusioru na-anọgidesi 0.4-1.2%.
606 ukwuu oru oma arọ Cleaner wepụ slurry ájá, iron filings, ájá na ibu ink ahụ na ndị ọzọ na-adịghị ọcha na a dịgasị iche iche nke pulp ọcha usoro. 400 arọ Cleaner nwere ike ikpokọta dị ka slurry dị iche iche ìhè Cleaner, iji nweta chọrọ ihicha mmetụta.
Ntughari uzo: 580-600L / min
N'ime oghere plasma: 0.6-1.0%
A na-etinye nhicha nke Centrifugal n'ọtụtụ ebe na usoro usoro nke igwe mpempe akwụkwọ, na-agbapụta ma na-echekwa usoro mkpofu mkpofu.Ọ nwere ike wepu ihe gbazee agbaze, ihe ink, eriri eriri, ezigbo na adịghị ọcha nke jiometrị na ngwaahịa akwụkwọ n'ụzọ dị irè. Ọ nwere ike ịmepụta pulp maka akwụkwọ dị elu na-enweghị ntụpọ dị elu na ọdịnaya unyi.
Ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na ihuenyo na-ekpofu na mpempe akwụkwọ mkpofu, mee ka usoro nhazi ahụ dị mfe ma belata ike oriri.
Ngwunye pulp na 0,5 na 1.0% na-agbanwe agbanwe na-eri nri site na isi ọkpọkọ isi nke ndị na-ehicha ihe na ngwaahịa ahụ na-abanye na ntanetị dị mkpa nke na-eme ka ngwaahịa ahụ gbadaa na-agbada. A na-amanye mmetọ dị ka unyi, shive, na specks nwere nnukwu ike ndọda na mgbidi mpụga nke cone na gbadata site na ịjụ ịpụpụ ụzọ iji jụ nkụnye eji isi mee, ịjụ ajụ ọzọ na-eri nri na ọkwa nke 2 nke ndị na-ehicha ihe.
Microcrystal wear-eguzogide alumina cone / nozulu
* Were ngwa ebe: Alumina wear-n'iguzogide cone / nozulu adabara maka screening akụrụngwa nke ulo oru ihe ndị dị ka akwụkwọ na nkume igwe nri, mmanụ ala, m, ígwè na nkume igwe nri, ike osisi, wdg Ọ ga-eji dị ka cyclone, slag eliminator, slurry uzo mmiri , ntụgharị ala, dayameta na-agbanwe, wdg.
Enwere ike iji nchara, polyurethane na ihe ndị ọzọ mee mpempe akwụkwọ nke alumina n'elu ikpo okwu alumina, na ime ime ahụ bụ nke alumina ceramik nwere ezigbo nguzogide na-eyi, nke ọ bụghị naanị na-enye egwu na akwa-okpomọkụ na-eyi na corrosion eguzogide nke Efere, kamakwa na-enye egwuregwu na njirimara nke ike dị elu na ịdị ike nke ihe ndị dị na mpụga iji gbochie mmebi seramiiki, na imepụta ihe eji arụ ọrụ dị mfe maka ngbanwe na ntinye.
Nke gara aga: 133 obere agbanwe agbanwe okpukpu abụọ na-ehicha ihe mkpofu ahihia nke igwe na-eji igwe / akwukwo
Osote: ISO9001 14001 ọkachamara pulp igwe anaghị agba nchara ala njupụta Cleaner eji maka pulp akwụkwọ Ndinam
Ọrụ nhicha dị elu
High njupụta Cleaner Akwụkwọ Machine
Obere nchapu ncha
Polyethylene Low njupụta Cleaner
Igwe anaghị agba nchara High njupụta Cleaner
Waste Akwụkwọ pulp Ọcha Low njupụta Centricleaner
Waste Akwụkwọ pulp ọcha Low njupụta Cleaner